Uvavanyo lokuguga lokumelana nomhlwa - iYuyao Jera Line Fitting Co, Ltd.
Uvavanyo lokuguga lokudumba olubizwa ngokuba luvavanyo lwegumbi elinetyuwa. Uvavanyo lulinganisa iimeko zemozulu ezahlukeneyo, ukufuma okuphezulu, umhlwa enobundlongondlongo, iqondo lobushushu eliphezulu lokuvavanya ukumelana nokubola kweemveliso okanye izinto zentsimbi. Olu vavanyo lusinceda ukuba sivavanye umgangatho weemveliso okanye izinto zokuqinisekisa ukuba imveliso yethu iyakwazi ukufaka isicelo kwiimeko ezahlukeneyo zemozulu.
Siqhubeka nolu vavanyo kwiimveliso ezingezantsi
-FTTH yehla ucingo uqinisa
-Aluminium LV ABC izibiyeli zentambo
Iibhaksi zensimbi ezingenasici
Izixhobo zentsimbi ezifanelekileyo
Igumbi lokuvavanya lenziwe kwangaphambili ngokuzenzekelayo, elinokuthintela iimpazamo zabantu ukuqinisekisa ubunyani kunye nokuchaneka kovavanyo. Uvavanyo lilinganisa imeko yemozulu yolwandle apho inesithako esichaphazelayo: i-sodium chloride kwaye iya konakalisa izixhobo zesinyithi. Olu vavanyo lolunye lweyona nto ibaluleke kakhulu kulungiso lwesinyithi, njengocingo lwebhola yomsundululu, kunye noonokrwece bokuqina kwento, iindawo zentsimbi zokuvalwa kwefiber optic splice.
Umhlwa, ubushushu, ubume bokufuma kunye nexesha zinamaxabiso ahlukeneyo ngokwemigangatho ye-EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T 1190-2012 yezixhobo zokuhambisa umbane, kunye ne-IEC 61284 ngentambo ephezulu ye-fiber optic, kunye nezixhobo.